Farmaajo iyo Uhuru maka wada hadli karaan arrinta muranka badda? - BBC News Somali
Image caption Uhuru iyo Farmaajo ayaa ku kulmay Nairobi
Madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Kenya ayaa kulan ay maanta oo Arbaco ah ku yeesheen Magaalada Nairobi uga wada hadlay xallinta khilaafka diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeya labada dal.
Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa ku guuleystay in uu hal meel isugu geeyo labada hoggaamiye oo ay dowladahooda ka dhaxeysay xurguf siyaasadeed oo cirka isku sii shareertay isbuucyadii lasoo dhaafay.
War qoraal ah oo lasoo dhigay barta uu Twitter-ka ku leeyahay ra'iisul wasaare Abiy Axmed ayaa lagu sheegay in Uhuru iyo Farmaajo ay saaka is arkeen heshiisna ka gaareen sidii ay uga wada shaqeyn lahaayeen xallinta khilaafka soo kala dhex galay , gaar ahaan arrimaha dabka kusii shiday xiisadda.
Hoggaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo cambaareeyay tallaabada uu qaaday madaxweyne Farmaajo ayaa qoraal uu boggiisa facebook soo dhigay ku yidhi: "Waa xad gudub lagula kacay caqliga iyo garaadka shacabka Soomaaliyeed, in ay Madaxtooyada Soomaaliya tiraahdo Kenya iyo Soomaaliya way heshiiyeen, iyagoo aan soo hadal qaadin xudduntii khilaafka dhalisay".
Hase ahaatee su'aasha la isweydiinayay ayaa ku saabsaneyd in Uhuru Kenyatta iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay awood u leeyihiin iney ka hadlaan arrinta muranka badda.
Image caption Ra'iisul wasaare Abiy Axmed ayaa ka shaqeeyay kulanka labada hoggaamiye
"Labada waddan xiriirkoodu wuu go'ay, safiirradii ayaa la eryay, marka jidka ugu habboonaa wuxuu ahaa marba haddii dal saddexaad uu dhex dhexaadinayo inuu ku kulansiiyo caasimadda waddankiisa, sidaas awgeed Itoobiya hadday dhexdhexaadineyso Kenya iyo Soomaaliya, waxay ahayd inay hoggaamiyeyaasha isugu geyso magaalada Addis Ababa", ayuu yidhi Ciid.
"Arrinta badda ma aha mid uu Abiy Axmed wax ka qaban karo ama Farmaajo uu wax ka baddali karo, umadda Soomaaliyeed way soo jeeddaa, dhulkeedana way ku adagtahay. Arrintu maxkamad bay taallaa waxaana la sugayaa inta uu go'aanka maxkamadda soo baxayo", ayuu yidhi.
Ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa tan iyo markii uu xilka qabtay sannadkii lasoo dhaafay waxa uu horseeday isbadallo badan oo ka dhacay gobolka geeska Afrika iyadoo sidoo kalena uu isbaddal ku yimid hannaankii diblomaasiyadda.
Image caption Dr Abiy Axmed ayaa dadaal u galay xalinta xiisadaha gobolka
Horay waxa uu usoo afjaray colaaddii muddada dheer ka dhex aloosneyd Itoobiya iyo waddanka dariska la ah ee Eretariya.
Barfasoor Cabdi Ismaaciil Samatar oo falanqeeya siyaasadda ayaa BBC-da u sheegay in saameyn badan uu la yimid Ra'iisul wasaaraha Itoobiya.
"Abiy Axmed waa nin fikrad cusub ku dhaliyay geeska Afrika iyo Itoobiya gudaheeda, waxaadna mooddaa inuu maskax nool keenay, meel ay gaari doonto Ilaah baa og. Sida muuqata labo arrimood ayuu xoogga saarayaa midda koowaad oo ah inuu adduun weynaha u muujiyo inuu hoggaamiye u noqday guud ahaan gobolka, nabaddana u hor seeday, taasoo laga yaabo inuu ku raadinayo abaal marinta caalamiga ah ee nabadda iyo tan labaad oo ah inuu jiho u helo dhaqaalaha Itoobiya ee ciirciiraya", ayuu yidhi Samatar.
Isagoo fikirkiisa cabirayay ayuu yidhi: "Dadka Soomaaliyeed ma aqbali doonaan gorgortan dhanka xuduudda badda ah wayna ogyihiin xaqoodu meesha uu yaallo".